Vaovao - Fironana amin'ny ho avy - Fampandrosoana manontolo ny e-varotra e-varotra
Araka ny tranokalan'ny General Administration of Customs dia mitombo haingana ny e-commerce cross-border. Tamin'ny taona 2020, lisitra fanafarana sy fanondranana 2,45 miliara no nankatoavina tamin'ny alàlan'ny sehatra fitantanana ny e-varotra miampita sisintany miaraka amin'ny fitomboana 63,3% isan-taona raha ampitahaina amin'ny taona teo aloha. Mampiseho ny angon-drakitra fa i Sina (Hangzhou) E-commerce Comprehensive Pilot Zone (Xiasha Industrial Zone), izay valan-tserasera e-commerce lehibe indrindra any Shina ary sokajy entana feno indrindra dia manana 46 tapitrisa 11.11 tahiry ao amin'ny 2020, fitomboana 11%. Mandritra izany fotoana izany, ny entana 11.11 ao amin'ny valan-javaboary dia betsaka kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa, ary ny loharano dia avy amin'ny lafivalon'i Japon, Korea Atsimo, Alemana ary ireo firenena sy faritra hafa. Ho fanampin'izany, maherin'ny 70% ny fanondranana e-varotra an-tsokosoko an-tsokosoko dia amidy eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny faritry ny Reniranon'i Pearl River any Guangdong, ary ny varotra miampita sisintany an'i Guangdong dia miompana indrindra amin'ny fanondranana fa tsy manafatra .
Ankoatr'izay, tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020, nahatratra 187,39 miliara RMB ny sehatry ny fitantanana sy ny fanondranana sisintany e-commerce any Shina, izay nahatratra fitomboana 52,8% isan-taona haingana raha oharina amin'ireo tarehimarika tao anatin'io fe-potoana io ihany tamin'ny taona 2019. .
Satria ny fivezivezena e-commerce cross-border dia nanjary fivoarana bebe kokoa ary fomba matotra tsara kokoa, ary hita koa miaraka amin'ireo indostria fampitaovana mifandraika amin'izany, dia manome fotoana bebe kokoa ireo orinasam-pifandraisana sinoa. Tsy ny rehetra no handeha hisoratra anarana amin'ny marika, hamorona tranokala, hanokatra fivarotana, na ho lasa mpamatsy, fa afaka manao serivisy fanampiana fanampiny ho an'ireo orinasa e-varotra miampita sisin-tany ireo, manomboka amin'ny rojom-pivarotana ka hatramin'ny marika, manomboka amin'ny lampihazo. serivisy ka hatramin'ny fampiroboroboana, manomboka amin'ny fandoavam-bola ka hatramin'ny logistika, manomboka amin'ny fiantohana ka hatramin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny ampahany rehetra amin'ny rojo iray manontolo dia azo alaina amin'ny maodely fandraharahana vaovao.